थाहा खबर: उपन्यास लेख्‍न चाहनेलाई सुविन भट्टराईका २० टिप्स
काठमाडौं : उपन्यास कसरी लेख्‍ने? लेखनको सरलता र भाषाको सुन्दरता उपन्यासमा कसरी राख्‍ने? मन छुने कसरी बनाउने?
'बेटर नेपाल' नामक संस्थाले गत शनिबार गरेको उपन्यास लेखन कार्यशालाका सहभागी यस्तै प्रश्नहरु बोकेर उपस्थित थिए। काठमाडौंको शंखमुलस्थित चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ मेनेजमेन्टमा आयोजित कार्यशालामा उपन्यास लेख्‍न चाहनेलाई आफ्ना अनुभव सुनाउँदै थिए उपन्यासकार सुविन भट्टराई।
तीन उपन्यास (समर लभ, साया, मनसुन) र एक कथा संग्रह (कथाकी पात्र) बाट युवापुस्ताको मन जितेका सुविनको लेखन अनुभव सुन्न ४० जना युवायुवती आतुर थिए। उपन्यास लेख्न चाहने उनीहरुलाई सुविनले आफ्ना अनुभव मिश्रित टिप्सहरु दिए। उपन्यास लेखनबारे सुविनका टिप्सको अडियो यो सामग्रीको अन्तिममा छ।
कस्ता पात्रहरु छन् भन्नेले नै कसका लागि लेखिँदैछ भन्ने निर्क्यौल हुन्छ। सम्पूर्ण समाजका लागि एउटै उपन्यास लेख्न सम्भव हुँदैन। महिला, युवा, धर्म, समूह, वर्ग कसका लागि लेख्ने हो छुट्याउनुपर्छ। त्यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्छ। सम्बन्धित विषयका लागि स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसका बारेमा विभिन्न तरिकाबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तैः मैले 'समर लभ' लेख्नु पहिला नर्बे घुमेको थिइनँ। त्यहाँको परिवेशबारे लेखेँ। त्यसका लागि नर्बेमा भएका साथीहरुलाई रातरातभर त्यहाँको अवस्था स्काइप मार्फत देखाउन भनेँ।
उपन्यास वा कथा जेसुकै होस्, सुरुवात चाख लाग्दो हुनुपर्छ। जस्तै 'र ऊ मरी…!' यसले पाठकमा 'यसपछि के होला?' भनेर उत्सुकता जाग्छ। त्यस्तै चाखलाग्दो संवादबाट पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ। कुनै चिज गहन छ भने न्यारेसन (कथ्य) मा भन्नु हुँदैन, त्यसलाई पात्रका सम्वादमार्फत भन्नुपर्छ। घटना, पात्रका संवाद र भन्न खोजेको सन्देश मिलाएर दिनुपर्छ। गन्थन र भाषणबाट सुरु गर्नु हुँदैन। यस्तो गर्नु लेखकको रोग हो।
लेख्दाखेरी लामा चौडा कुरा लेख्नुहुन्न। छोटा वाक्य लेख्नुपर्छ। भन्न खोजेका कुरा 'टू द पोइन्ट' लेख्नुपर्छ। साहित्य फूटबल खेलेजस्तै खेलाउँदै जानुपर्छ भन्ने छ, जसका लागि भाषामा खेल्नुपर्छ। भाषा र प्रस्तुतिमा कुरा आउनुपर्छ। पात्रसँगै उपन्यासको घटनाक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ।
'समर लभ' मा मैले धनगढीको गर्मीलले 'मम जस्तै स्टिम्ड' पारेको भनेको छु। यो नयाँ विम्बको प्रयोग हो। हामी साइबर युगमा छौँ। अब रातलाई विम्बमा भन्दा 'चुक घोप्ट्याएजस्तो अध्याँरो' विम्ब हजारौंपटक प्रयोग भइसके। 'पासवर्ड जस्तै गोप्य' को प्रयोग गरेको छु मैले। विम्बले लेखनलाई पठनीय बनाउँछ।
लेखनको भाषा कविताजस्तो हुनुपर्छ। प्रत्येक लाइन अन्डरलाइन गर्न लायक होस्। पढ्दाखेरि वाह ! भन्न मन लाग्ने लाइन हाल्नुपर्छ। यसले गर्दा २-३ पाठ पढ्दा 'बोर फिल' गरेको पाठकले १ लाइन पढ्दा क्षमा गरिदिन्छन्। केही राम्रा लाइन बाटोमा फुर्छन्, साथीसँग कुरा गर्दा फुर्छन्। फुर्ने बित्तिक्कै लेखिहाल्नुस्। म बाइक कुदाइरहेको बेला फुरे पनि रोकेर टिप्ने गर्छुं।
कथामा द्वन्द्व हुनुपर्छ। केका लागि भइरहेको छ? कुनै कथा आयो र कथामा समस्याहरु छन् भने त्यो नै द्वन्द्व हो। द्वन्द्वले नै कथालाई 'अप एन्ड डाउन' बनाइराख्छ। पात्रहरुलाई माथि चढाउने र तल झार्ने काम द्वन्द्व मार्फत राम्रोसँग गराउन सक्नुपर्छ।
मलाइ यी टिप्स हरु मन पर्यो ।अब म पनि यसै गरि कोसिस गर्छु।